လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မယ့် အချက်(၃)ချက် -
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မယ့် အချက်(၃)ချက်
Posted on March 14, 2019 March 14, 2019 Author Wynee Myanmar	Comment(0)
အခွင့်အလမ်းမဖန်တီးရင်တော့ တိုးတက်မှုလမ်းစတွေ ပျောက်ဆုံးနေဦးမှာပါ 🤧 🤧 🤧
လုပ်ငန်းခွင်မှာလိုအပ်လာမယ့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို စာသင်ကျောင်း (သို့မဟုတ်) အလုပ်ရှင်တွေက တစ်ခါတစ်ရံ စီစဉ်ပေးတတ်ပေမဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တစ်လျှောက်လုံးမှာ ထူးချွန်လာဖို့ ၊ အတတ်ပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်မှု အသစ်တွေကိုသင်ယူပြီး တိုးတက်လာဖို့ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မင်မင်ကနေ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့ အကြံပေးချက်လေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ဒီအချက်လေးတွေက အရည်အချင်း အသစ်တွေပျိုးထောင်ရာမှာ အထောက်အကူပေးနိုင်ပြီး အဲ့ဒီအရည်အချင်းတွေကတဆင့် ခြေလှမ်းအသစ်တွေ တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ယောင်းတို့ကိုတွန်းအားဖြစ်စေနိုင်မှာပါ။
၁။ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတစ်ခု နေ့တိုင်းရေးပါ
တစ်နေ့တာ ပြီးဆုံးတိုင်း ခံစားချက်တွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ ရယ်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ယောင်းတို့ဘာတွေပြီးမြောက်ပြီးပြီလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာ ကြိုးစားရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတာတွေကို မှတ်စုရေးထားပေးပါ။
Related article>>>ကိုယ့်ရဲ့ career မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် လက်လွှတ်လိုက်သင့်တဲ့ ယုံကြည်မှု ၃ခု
၂။ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
သင်ယူမှုပိရမစ် သီအိုရီအရ ယောင်းရဲ့သင်ယူမှုတွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဆွေးနွေးခြင်းဟာ ယောင်းတို့ရဲ့ မှတ်မိနိုင်စွမ်းကို (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက် မြင့်တက်လာစေပါတယ်။ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင် (သို့) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြတိုင်ပင်ပါ။ အပြန်အလှန်အတွေးတွေ ဖလှယ်ရင်းကနေ ယောင်းတို့ဘဝ တိုးတက်နိုင်ဖို့လမ်းစတွေ ၊ အခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို အနည်းအကျဉ်းတော့ ရရှိနိုင်မှာပါ။
၃။ ပန်းတိုင်များ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး လမ်းပြမြေပုံတစ်ခု ဖန်တီးပါ
ယောင်းတို့လုပ်ငန်းသက်တမ်း အတွက် ငါးနှစ် (သို့) ဆယ်နှစ်တာ အစီအစဉ်တစ်ခု ဖန်တီးရေးဆွဲပါ။ ပထမဦးဆုံး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ပန်းတိုင်ဆီ ရောက်နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းတွေ ဖြည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ဘယ်နှနှစ်အတွင်းမှာတော့ ဘာတွေပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကို တစ်ခါတည်းသတ်မှတ်ပြီင်္း ဖြစ်မြောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
Related article>>>အောင်မြင်တဲ့ဘဝတက်လမ်း အောင်မြင်တဲ့ Career သို့သွားမယ်
ယောင်းတို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအကြံပြုချက်တွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါနော်။ နှစ်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ အခွင့်အလမ်းတွေ ဆထက်တပိုးရရှိနိုင်ကြပါစေနော်။
ဤဆောင်းပါးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော Wynee Myanmar Organization အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
အခှငျ့အလမျးမဖနျတီးရငျတော့ တိုးတကျမှုလမျးစတှေ ပြောကျဆုံးနဦေးမှာပါ 🤧🤧🤧
လုပျငနျးခှငျမှာလိုအပျလာမယျ့ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုတှကေို စာသငျကြောငျး (သို့မဟုတျ) အလုပျရှငျတှကေ တဈခါတဈရံ စီစဉျပေးတတျပမေဲ့ လုပျငနျးခှငျတဈလြှောကျလုံးမှာ ထူးခြှနျလာဖို့ ၊ အတတျပညာပိုငျးကြှမျးကငျြမှု အသဈတှကေိုသငျယူပွီး တိုးတကျလာဖို့ကိုတော့ ကိုယျတိုငျဖနျတီးယူရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ မငျမငျကနေ နစေ့ဉျလုပျငနျးခှငျထဲမှာ သငျယူမှုအခှငျ့အလမျးတှေ ဘယျလိုဖနျတီးရမလဲဆိုတဲ့ အကွံပေးခကျြလေးတှကေို ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ။ ဒီအခကျြလေးတှကေ အရညျအခငျြး အသဈတှပြေိုးထောငျရာမှာ အထောကျအကူပေးနိုငျပွီး အဲ့ဒီအရညျအခငျြးတှကေတဆငျ့ ခွလှေမျးအသဈတှေ တကျလှမျးနိုငျဖို့ ယောငျးတို့ကိုတှနျးအားဖွဈစနေိုငျမှာပါ။
၁။ နစေ့ဉျမှတျတမျးတဈခု နတေို့ငျးရေးပါ
တဈနတေ့ာ ပွီးဆုံးတိုငျး ခံစားခကျြတှေ၊ ပြျောရှငျမှုတှေ၊ စိုးရိမျပူပနျမှုတှေ၊ ရယျစရာကောငျးတဲ့အဖွဈအပကျြတှနေဲ့ ယောငျးတို့ဘာတှပွေီးမွောကျပွီးပွီလဲ၊ ဘယျနရောမှာ ကွိုးစားရုနျးကနျရတယျဆိုတာတှကေို မှတျစုရေးထားပေးပါ။
Related article>>>ကိုယျ့ရဲ့ career မှာ ပြျောရှငျဖို့အတှကျ လကျလှတျလိုကျသငျ့တဲ့ ယုံကွညျမှု ၃ခု
၂။ တဈစုံတဈယောကျနဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပါ
သငျယူမှုပိရမဈ သီအိုရီအရ ယောငျးရဲ့သငျယူမှုတှနေဲ့ စိနျချေါမှုတှကေို ဆှေးနှေးခွငျးဟာ ယောငျးတို့ရဲ့ မှတျမိနိုငျစှမျးကို (၇၀)ရာခိုငျနှုနျးလောကျ မွငျ့တကျလာစပေါတယျ။ တှကွေုံ့ခဲ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို သူငယျခငျြး၊ မိသားစုဝငျ (သို့) လုပျဖျောကိုငျဖကျ တဈယောကျယောကျကို ပွောပွတိုငျပငျပါ။ အပွနျအလှနျအတှေးတှေ ဖလှယျရငျးကနေ ယောငျးတို့ဘဝ တိုးတကျနိုငျဖို့လမျးစတှေ ၊ အခကျအခဲဖွရှေငျးနိုငျဖို့ နညျးလမျးတှကေို အနညျးအကဉျြးတော့ ရရှိနိုငျမှာပါ။
ယောငျးတို့လုပျငနျးသကျတမျး အတှကျ ငါးနှဈ (သို့) ဆယျနှဈတာ အစီအစဉျတဈခု ဖနျတီးရေးဆှဲပါ။ ပထမဦးဆုံး ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို ရှေးခယျြပါ။ ပနျးတိုငျဆီ ရောကျနိုငျမယျ့ လမျးကွောငျးတှေ ဖွညျ့လိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ဘယျနှနှဈအတှငျးမှာတော့ ဘာတှပွေီးအောငျလုပျမယျဆိုတာကို တဈခါတညျးသတျမှတျပွီင်္း ဖွဈမွောကျအောငျ အကောငျအထညျဖျောပါ။
ယောငျးတို့နစေ့ဉျလုပျငနျးခှငျထဲမှာ သငျယူမှုအခှငျ့အလမျးတှဖေနျတီးခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီအကွံပွုခကျြတှကေို လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောနိုငျအောငျ ကွိုးစားကွပါနျော။ နှဈတှပွေောငျးလဲလာတာနဲ့အမြှ အခှငျ့အလမျးတှေ ဆထကျတပိုးရရှိနိုငျကွပါစနေျော။
ဤဆောငျးပါးအတှကျ ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော Wynee Myanmar Organization အား အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
Tagged Career, chances, goals, Knowledge, learning, map
Wynee isacommunity of young people and professionals dedicated to providing career guidance to the youth of Myanmar. Check out WyneeMyanmar.com to join the community and gain access to many more articles, Sign up for events across Myanmar, and participate in our online question and answer platform.
ဝက်ခြံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အမာရွတ်တွေကို နှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်
Posted on September 27, 2017 September 27, 2017 Author Hnin Ei Oo
ဝက်ခြံတွေ ပျောက်သွားလို့ ဝမ်းသာမယ်ကြံလိုက်တယ်.. အမာရွတ်တွေကြောင့် ပိုဆိုးသွားတယ်…
ရထားတဲ့ဘွဲ့က လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိရင် ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲ။
Posted on August 13, 2018 January 9, 2019 Author Wynee Myanmar
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာအတွက် ကြိုးစားခွင့်တွေ ကိုယ့်မှာ ရှိနေဆဲပဲလေ…
ညိုပြာညက်တို့ အားသာချက် (၆)ချက်
Posted on November 1, 2016 October 9, 2018 Author Nilar
အရိုတစ်လိုင်းယောင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအချစ်ရုပ်ရှင်ကား (၃) ကား